तपाईको ( बिहिबार बैशाख १६) को राशीफल -
तपाईको ( बिहिबार बैशाख १६) को राशीफल
२०७८, १६ बैशाख बिहीबार ००:५३ April 29, 2021 clickonLeaveaComment on तपाईको ( बिहिबार बैशाख १६) को राशीफल
सामाजिक डरले तपाईंलाई सताउन सक्छ। यसलाई हटाउन आफ्नो आत्मसम्मानलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। तपाईंको सहयोगको आवश्यकता पर्ने साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
योग र ध्यान तपाईंलाई तन्दुरूस्त र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन मद्दत गर्नेछ। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस् – तर आर्थिक फाइदा भने होस्। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। आज एकोहोरो माया विनाशकारी साबित हुनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीको कुनै काम बारे अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नु हुनेछ। तर पछि यसलाई राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
बुजुर्गहरूले राम्रो लाभको लागि आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जाको सकारात्मक प्रयोग गर्न आवश्यक छ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। घर वा सामाजिक भेलामा भएको मरम्मतको काममा तपाईं व्यस्त हुने सम्भावना छ। तपाईंले के के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रेमीसँग भन्नुभयो भने गम्भीर समस्या हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको दृश्य आफुले सोचेभन्दा पछाडि जाँदै गरेको जस्तो महसुस हुनेछ – अर्को केही दिनमा राम्रो अवसर तपाईंसँग हुनेछ। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। आज तपाईं वा तपाईंको जोडीलाई ओछ्यानमा चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले एक-अर्कासँग नम्र हुनुहोस्।
तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। तपाईंले सबैको मागको याद गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने धेरै समस्यामा पर्नु हुनेछ। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुन: आकलन गर्ने समय। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
तपाईंको लागि मान्छेलाई जबरजस्ती काम गर्ने बाध्य नगराउनुहोस्। तपाईंलाई असीमित आनन्द दिने अरूलाई गर्न चाहेको र चासोको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। आफ्ना व्यक्तिगत समस्याको समाधानको लागि कुनै मित्रले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छ। प्रेममा हतार नगर्नुहोस्। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। कार्यक्रमहरू राम्रा र समस्यापूर्ण हुने दिन – जसले तपाईंलाई भ्रमित र थकित छोड्नेछ। आज तपाईंको जीवनसाथीले आवश्यकताको समयमा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको तुलनामा तपाईंका परिवारका सदस्यहरूलाई कम हेरविचार र महत्व दिन सक्छ।
तपाईंको हत्पते प्रकृतिले तपाईंलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। निर्णयको बाटामा गर्वलाई आउन नदिनुहोस्। अधिनस्थहरूले भनेको पनि सुन्नुहोस्। आफ्नो उपस्थिति बढाउन र सम्भावित साथीलाई आकर्षित गर्न सक्ने परिवर्तन गर्नुहोस्। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
निष्क्रिय समस्याहरू देखिन्छन् जसले गर्दा मानसिक दबाब पर्दछ। आज तपाईंले अरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु पर्छ तर बच्चाहरुसँग अतिरिक्त उदार हुनाले मात्र समस्या बढ्नेछ। तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यममा आफैलाई संलग्न गर्नबाट जोगिनुहोस् – र तपाईंलाई आवश्यक भएमा आफ्ना घनिष्ट मान्छेको सल्लाह लिनुहोस्। तपाईंको जोडी प्रेमको भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस, आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्यवान् अल्छी देवी हो। साथी तथा आफन्तहरूसँग मजा गर्नुहोस्। प्रेम महसुस गर्ने र आफ्नो प्रियसँग बाँट्ने भावना हो। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
यदि तपाईं विगतका घटनाहरूको याद गर्नुभयो भने – तपाईंको निराशाले आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ – सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। घरेलू घरधन्दामा आफ्नी पत्नीलाई उनको कार्यभार कम गर्न सहयोग गर्नुहोस्। यसले साझेदारी र आनन्दको लागि प्रोत्साहन दिनेछ। रोमान्टिक भेटघाट अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ तर लामो रहने छैन। तपाईंले आफ्नो कार्यमा प्रमुख निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। समयमा र तेज कार्यले अरूको भन्दा राम्रो धार दिन सक्छ। तपाईंले केही उपयोगी सुझावहरूको लागि आफ्ना अधिनस्थहरूबाट पनि केही सुन्न सक्नु हुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
स्व-सुधार परियोजनाहरूले धेरै प्रकारको फाइदा हुनेछ – तपाईंले आफ्नो बारेमा राम्रो र विश्वस्त महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंको व्यक्तिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण विकास हुनेछ जसले तपाईं र तपाईंको सम्पूर्ण परिवारमा हर्षोल्लास ल्याउनेछ। आफ्नो कामको लागि मन मिल्ने साथीहरूको मद्दत लिनुहोस्। तिनीहरूको समयमा दिएको मद्दत तपाईंलाई महत्वपूर्ण र लाभदायक हुनेछ। चिकित्सा प्रतिलेख गर्न धेरै राम्रो दिन हो। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
आर्थिक स्थिति र वित्तीय समस्या भने तनाउको कारण बन्नेछन्। तपाईंलाई नयाँ वित्तीय लाभ प्रदान गर्न केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। बन्धन र जोडिनुसँग सम्बन्धको नवीकरणको लागि सही दिन। धार्मिक र शुद्ध प्रेमको अनुभव गर्नुहोस्। कामको सन्दर्भमा आजको दिन धेरै राम्रो देखिन्छ। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। आजको दिन ‘पागल हुने’ दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
अचानक अज्ञात भएका सांसद अस्पतालको कोरोना आइसोलेसनमा फेला परे, सांसदको एउटा पिसिआर रिपोर्टमा पोजिटिभ, अर्कोमा नेगेटिभ, तथ्य के?
सांसदको उपचारका नाममा बन्दि बनाई राखिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको आरोप
२०७६, २८ पुष सोमबार ०१:४० January 13, 2020 clickon